Mischievous Me! – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
7 thoughts on “Mischievous Me!”
ပုံရယ်၊ ပုံစာရယ် နဲ့ တွဲဖတ်လိုက်တော့ ပြုံးမိတယ်။
ကျွန်မ မှာတော့ ရမ်းတီးလိုက်ရင် တလွဲဖြစ်တာ များတယ်။
လောလောလတ်လတ်ဖြစ်ထားတာက ဆေးရုံကို ကိစ္စရှိလို့ ခဏသွားရင်း သန့်စင်ခန်းဝင်မိတယ်။ ဒီဘက်ခန်းတွေ လူပြည့်နေလို့ ကပ်လျက်က ပိုကျယ်တဲ့ အခန်းထဲ ဝင်မိတယ်။ မျက်စိလျှောက်ကစားပြီး လက်နဲ့ နီးနီးမှာ ခလုတ်တစ်ခုတွေ့တော့ စပ်စုမိတယ်၊ စာလည်း ရေးမထားတော့ အန္တရာယ်တော့မဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး နှိပ်ထည့်လိုက်တာ အိမ်သာကြွေအိုး အတွင်း အနောက်ဖက်လောက်က ရေတွေ ပန်းထွက်လာပါရော၊ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ လန့်သွားလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့၊
နောက်မှ သိတာက အဲဒီအခန်းကျယ်က ဘီးတပ်ကုလားထိုင်သမားတွေအတွက်၊ ခလုတ်က သူတို့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင် လွယ်အောင်လုပ်ထားတာ၊ အဲဒါကြောင့် ဒိကြွေခွက်က သာမန်ထက် နိမ့်နေတာကိုး။
9 October 2009 at 6:15 pm
နောက်တခန်းဘာဖြစ်မလဲ ဖတ်ချင်လှပြီ…(စာကူရိုက်ဆို ရိုက်ပေးပါမယ် … :P)
ဆရာရေးထားတာ ရသမြောက်တယ် ဖတ်နေရင်းနဲ့ ဘာများဖြစ်မလဲဆိုပြီး သမီးပါ ရင်တုန်မိတယ် 🙂
တင်ထားတဲ့ အခန်းသုံးခန်းမှာ ဒီအခန်းက ဇာတ်ရှိန်မြင့်ပြီး ရယ်ရတယ်ဗျ…. ကော်ဖီအရသာက ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ? အဆင်ပြေသွားရောလား? ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ….
9 October 2009 at 10:52 pm
သူ့ခမျာ ကော်ဖီရည်တွေ မနားတမ်း ဆက်ကျလာရင် ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်း သိမှာမဟုတ်ဘူးနော် .. 🙂
ကျနော် တစ်ခါ သောက်ဖူးတဲ့ ကော်ဖီစက်က ဒီလို.. စက်ထဲကို ပိုက်ဆံထည့်၊ ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရင် ခွက်ကလေးက ရောက်လာ ကော်ဖီရည်တွေ ကျလာ အဲသလို… တစ်ခါတော့ ပိုက်ဆံထည့် သောက်ချင်တဲ့နံပါတ် ခလုတ်နှိပ်လိုက်တာ အောက်က ခံမယ့်ခွက်က ရောက်မလာဘဲ ကော်ဖီရည်တွေက အောက်ကိုကျ.. အောင်မယ်မင်း… လက်နဲ့ပဲ ခံသောက်ရတော့မလိုလို.. ပိုက်ဆံပဲ စက်ထဲကလက်နဲ့နှိုက်ထုတ်ရတော့ မလိုလို.. 🙂
10 October 2009 at 10:48 pm
နွှေအိပ်မက်ကျ အာရုံခံစက် တပ်ထားတဲ့ အိမ်သာထဲမှာ ဒုက္ခရောက်တာ… ပြောကို မပြောချင်တော့ပါဘူး.. အဟုတ်..
Previous Previous post: Royal Me!!!
Next Next post: A Spinster in Trouble